Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 15/12/2019)
Ataovy indrindra ny vanim-potoana mangatsiaka amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Best Festivals ririnina any Eoropa. Ny fety tafiditra amin'izany ny zava-drehetra avy tia manao ski ambony sy ny snowboarding ny mozika, hatsikana, ranomandry sary sokitra, sady nanelatrelatra fetibe matso. Ity ambany ity ny ambony 5 fantina ny zavatra ho hitanao mitranga manerana an'i Eoropa, tamin'ny Janoary sy Febroary.
Ndeha hanomboka amin'ny ririnina fety any Eoropa, ary eny izahay ho any Ekosy
Edinburgh Hogmanay dia iray amin'ireo tsara indrindra eran-tany New taona Fankalazana, tena bibidia sy wooly atin'akanjo mandeha. Hogmanay dia ny Scottish teny Réveillon ary ny Hogmanay Edinburgh fetibe dia lasa iray amin'ireo lehibe indrindra Taom-baovao eto amin'izao tontolo izao. Edinburgh ny Hogmanay dia 3 andro fety feno ny zava-nitranga izany dia ahitana ny torchlight filaharana, velona fampisehoana mozika, family zava-mitranga, an-dalambe goavana antoko, dihy nentim-paharazana, afomanga, ary na ny costumed matso izay mifarana amin'ny mandroboka mangatsiaka tao amin'ny ony!
Londres Hyde Park Winter Hafakely miverina ho Hyde Park in 2018 sy ny ranomandry mamirapiratra rink, Noely goavana tsena sy ny mahafinaritra, feno mitaingina. Ataovy azo antoka maka vola sy tonga aloha mba tsy voa mafy amin'ny mitaingina mahagaga izay afaka mivarotra avy fifadian-kanina! Winter Hafakely malaza dia malaza, ary tsy afaka mitanisa ny tsara indrindra any Eoropa Winter fety tsy misy io izany!
Manazava ny maizina andro sy alina ny Luxembourg City dia Winterlights Luxembourg. Ao amin 'ny asa sy ny zava-nitranga maro tamin'ny manatera ny fianakaviana rehetra, ny Noely tsena hijanona ho mafy orina amin'ny toerana tena! Afaka manantena tanana entana, fitafiana, kilalao, Accessories ary mazava ho azy (ny toerana tena) feno sakafo matsiro miandry fotsiny ho nanandrana! Avy amin'ny nentim-paharazana “ovy Kichelchen” ny tsirony hafakely kokoa avy lavitra toerana, misy maintsy ho zavatra ho an'ny rehetra.
The best way to experience this pick of Winter Festivals in Europe is to visit the water exhibition is sambo. Canal Cruise orinasa manolotra Cruises nitarika manokana teny an-zavakanto. The Amsterdam Light Festival Cruise Mila 75 minitra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-festivals-europe%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#fety #winterfestival #Winterfestivals europetravel longtrainjourneys fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel travelamsterdam Winter Winterholiday